सु’क्‍न थाले तीनकुनेमा रोपिएका बिरुवा, ह’राउन था’ल्यो दुबो ! – Life Nepali
सु’क्‍न थाले तीनकुनेमा रोपिएका बिरुवा, ह’राउन था’ल्यो दुबो !
काठमाडौं : रा’तारात फूल तथा बिरुवा रो’पेर बगैंचा ब’नाइएको तीनकुनेमा बिरुवाहरू सु’क्न थालेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको रा’जकीय भ्र’मणका लागि स’जाउन तीनकुनेमा रो’पिएका बिरुवा सु’केका हुन्। तीनकुनेका तीनवटा भि’त्तामा माटो भरेर रा’तारात फूल तथा अन्य बि’रुवा रो’पिएको थियो। बिरुवा तथा फूल रो’पेपछि ‘सेल्फी चौर’का रुपमा प’रिचित भएको यो चौरका तीनवटा भा’गमा रो’पिएका कतिपय बिरुवा सु’क्न थालेका हुन्।’सेल्फी’ का लागि यसरी बो’र्ड टाँ’सेर प्र’बर्द्धन गरिएको छ। तीनकुने चौरका किनारमा तीनतिरबाट देखिने गरी रो’पिएको हरियो दुबो पनि अ’चानक ह’राउन थालेको छ।
तीनकुनेमा रो’पिएको दुबो सोमबार कतिपय ठाउँमा उ’प्किएको देखियो। उता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमण सु’रक्षा र का’र्यक्रम व्य’वस्थापनमा ख’टिएका सु’रक्षाकर्मी र क’र्मचारीले खाजा खर्च बापत् दैनिक ३ सय रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् ।वि’शेष सु’रक्षा का’र्ययोजना अनुसार तै’नाथ सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान वि’भाग र नि’जामती क’र्मचारीका लागि वि’विध शीर्षकअन्तर्गत दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले ३ दिनको खाजा खर्च दिन लागिएको हो ।सीको सु’रक्षामा चारै सु’रक्षा नि’काय र क’र्मचारी गरी करिब १६ हजार ज’नशक्ति तै’नाथ गरिएको थियो ।
प्रहरीबाट मात्रै ८ हजार ५ सय जनाभन्दा बढी ख’टिएका थिए । सरकारले १६ हजार ज’नशक्तिका लागि खाजा खर्च उ’पलब्ध गराए करिब डेढ करोड रुपैयाँ भु’क्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।वि’शेष सु’रक्षा का’र्ययोजना र का’र्यक्रम व्य’वस्थापनअन्तर्गत तै’नाथ क’र्मचारी र सु’रक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने प्र’स्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।‘राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्र’मण सु’रक्षा का’र्ययोजनाअनुसार ख’टिने सु’रक्षाकर्मी र क’र्मचारीलाई दैनिक ३ सयका दरले खाजा खर्च उप’लब्ध गराउन अर्थ म’न्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यससम्बन्धमा केही दिनभित्रै नि’र्णय हुन्छ ।’
Previous कम्तिमा पनि ६ जना मन्त्री हटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली l
Next निवासबाट विमानस्थलसम्म पनि हेलिकप्टरमा पुगिन राष्ट्रपति भण्डारी !